भीआइपीहरुले आफ्नो बानी र सिस्टम नसुधारेसम्म नेपालगन्जको जस्तै घटना दोहोरिरहन्छन् ! – ताजा समाचार
हिमाल युगपथ ।
भीआइपीहरुले पनि आफ्नो बानी सुधार्नुपर्छ । अझ सिस्टम नै सुधार्नुपर्छ ।
बेतुकको कार्यक्रममा अझै समय खर्चने ? मन्त्रीहरुको काम सही सिस्टम बनाउने हो । योजनाकारहरुसँग छलफल गर्ने, योजना बनाउने, समुह बनाउने र परिचालन गर्ने अनि नियमन गर्ने हो । गुनासा सुन्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित । यति काम गर्दिए हुन्छ ।
तर यहाँ अनावश्यक चाप्लुसीका कार्यक्रममहरुमा भीआइपीको भीआइपी समय खर्च भइरहेको छ । अझ कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा आयोजकहरुले लगाउने समय, गर्ने खर्च र व्यवस्थापन कुनै स्कुलको व्यवस्थापन सुधारमा लगाउने हो भने केटकेटीले राम्रोसंग पढ्न पाउथे ।
मन्त्रीहरुको काम गर्ने समयको आधाभन्दा बढी समय त कार्यक्रमको लागि यात्रा गर्दै र आसनग्रहण गर्दै सकिन्छ । महत्वूर्ण कामहरु कहिले र कसरी गर्ने ? त्यही कार्यक्रममा जाँदा आयोजकहरुले ढिलाइ गरिदिन्छन् । एउटै कुरा दोहोर्याइ तेहर्याइ भन्छन् । सुन्दिनै पर्यो । अनि कार्यक्रम ढिलो सकिन्छ, फर्कन ढिलो हुन्छ । जहाजका यात्रुहरु कुराइमा पर्छन् । कि त मन्त्रीले हेलिकप्टर चढ्नु पर्यो । त्यस्ले पनि राज्यकै ढुकुटी सक्ने हो ।
त्यसैले भीआइपीहरुले अब सिस्टम सुधार्नुपर्छ । जनताले संघीयताको अभ्यास शासनमा होइन, प्रशासनमा खोजेका हुन् । व्यवहारमा खोजेका हुन् । कृपया जनताका दिनचर्यालाई सहज बनाइदिनुस् । अब औपचारिक कार्यक्रमहरु आधा कटौति गरिदिनुस् । कार्यक्रम नभएर होइन, काम नभएर देश विकास नहुने हो ।
नेपालगन्जको घटनामा मन्त्री भट्टराइले गर्दा यात्रुहरुले निर्धारित समयभन्दा १ घन्टा ढिलो प्लेन उठेको भन्दै आफूलाई भष्ट्रचार विरोधी अभियान्ता भन्ने ज्ञानेन्द्र शाही लगायतको समूहले भनिरहहहेको छ भने मन्त्रीले १५ मिनेट मात्रै ढिलो भएको स्पष्ट पारेका छन् । यसलाई धेरै मानिसहरुले राजनैतिक रंग दिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर एक आम नागरिक भएर सोच्ने हो भने नेपालमा भिआइपी र भिभिआइपीका नाममा जनतालाई दु:ख दिने प्रचलन राजा महाराजका पालादेखि सुरुवात भएतापनि गणतन्त्र आइसक्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
यो परिपाटी यस्तै हुनेहो भने भोली ज्ञानेन्द्र शाही जस्तै विरोध गर्ने अर्का नेपाली जन्मन्छन् । उनीहरुले व्यक्तिको भन्दा पनि सिस्टमको बिरोध गरेका हुन् ।